Iqela le-YALIS-IsiXeko saseZhongshan IsiXeko seYALIS seMveliso yeHardware, Ltd.
1. Unxibelelwano lwentengiso: Iqela le-YALIS R & D lisebe lophando elizinikele kuphuhliso lwembonakalo, ulwakhiwo ngokutsha, uphando lwetekhnoloji kunye nezinye izisombululo zemveliso. Kukho i-8-10 yoyilo lwesitayile esitsha esiza kuluntu rhoqo ngonyaka.
2. Yenza into oyifunayo kwinkqubo nganye: ukusuka kuyilo loyilo ukuya kushicilelo lwe-3D, ukubumba, siyaqinisekisa ukuba inkqubo nganye idala ngezimbo kunye nokuqwalaselwa.
Ngexesha lokuvelisa nasemva kwentengiso, sithatha inkathalo epheleleyo kwinkqubo nganye ukubonelela abathengi bethu ngeemveliso eziphezulu kunye neenkonzo.
Isebe lezentengiso elinamandla likhuthaza ishishini lenkampani kwaye liqhuba ukuthengisa iimveliso, iinkonzo, kunye nokugcina ngokuqinileyo isantya sentengiso kunye nabathengi. I-YALIS inayo eyayo. Bancinci ngentshiseko, balanda imarike amaxesha ngamaxesha. Ngokusekwe kwiimfuno zentengiso, zibonelela ngeendlela zokukhuthaza, ukuthengisa kunye namasebe emveliso. Banikezela ngoncedo kubathengisi bethu / iiarhente ngendlela yokusebenza kweshishini labo kakuhle.
ISebe leNtsebenziswano leHlabathi
Isebe lentsebenziswano lamanye amazwe ligxile kwintsebenziswano nabadlali abaphambili, kubandakanya nabasasazi abaphezulu, abenzi beminyango kunye neekhontrakthi kwintengiso nganye yengingqi kunye nendawo. Banikezela ngengcebiso zeshishini, kwaye baliqela elithembekileyo elifanele intsebenziswano kuphuhliso lwexesha elizayo lweshishini lakho.
ISebe loLawulo loMgangatho
Inkqubo nganye ilawulwa ngokungqongqo liSebe lethu le-QC elomeleleyo, i-YALIS ilandelela ngokusondeleyo kwaye ibeke iliso kumgangatho wexesha lenkqubo yokuvelisa kunye neenkqubo zokukhetha zabanikezeli. Inkqubo nganye asivumeli iimveliso ezisemgangathweni ukuba zithengiswe kwimarike. Zonke izixhobo eziphambili kunye nezinto ezivavanywayo nganye nganye ziyahlolwa nganye nganye, ukuqinisekisa ukuba akukho kungabikho kokutyibilika kweziphatho ngelixa kuvulwa okanye kuvalwa ucango.